Gorfayn: Dhaqansidaha GOBAAD...
Dhaqansidaha Afka, suugaanta, Taariikhda, iyo Arrimaha Bulshada...
Cilmiga Xiddigisku wuxuu lafdhabar u ahaa dhaqanka Soomaalidii hore, waxayna aad ugu fiirsan jireen xiddigaha iyo muuqaallada ay sameeyaan, iyagoo aaminsanaa in ay saamayn xoog leh ku leeyihiin waxyaabaha dhulka ka dhacaya, cimilada, iyo noloshoodaba.
Akhrinta qormadan waxay i bartay in Xiddigisku lafdhabar u ahaan jirey nolosha Soomaalida. Qof ahaan, xilliyo kala duwan oo aan safarro gaagaaban ku tegey xeebaha Bari ee Soomaaliya, waxaan la yaabi jirey heerka aqooneed ee yaabka leh ee ay reer Barigu ka gaareen adeegsiga cilmiga xiddigiska, kaasoo illaa maantadan tiir-dhexaad u ah hab-nololeedkooda.
Hase yeeshee, Dr. Maxamed Daahir Afrax, oo ah qalin-maal iyo xeeldheere ku fogaadey arrimaha dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ayaa qoraal dheer oo uu ku qoray majaladdan wuxuu ku doodaya fikrad taas ka duwan.
Dambigii dhacay yaa ka mas’uul ah? Ma run bay sheegayaan dadka ku doodaya cidda ka mas’uulka ah in ay tahay guud ahaan hiddaha iyo qaabka fekerka Soomaalida, gaar ahaanna dhaqanka qabyaaladda ee ay weligeed kusoo dhisnayd bulshada Soomaalida? Dhaqanka Soomaalida iyo adduun-aragga uu da’aha soo koraya ku barbaariyo ma wuxuu ahaan jirey mid dadka u jiheeya dhanka burburinta, isu-xoog-sheegadka, gar-ma-qaatenimada, iyo kala-yaaca, mise wuxuu ahaa mid u jiheeya dhanka dhismaha, iskaashiga iyo nabadda?
Dr. Afrax, weydiimahaas kor ku xusan iyo kuwo kale oo la ayni ah ayuu soo hordhigayaa akhristayaasha, isagoo dabadeed unkaya dood culus oo jawaabo loogu raadinayo su’aalahaas qallafsan. Guud ahaan dooddaas iyo qaybaheeda kala duwan oo aad ii xiiso geliyey waxaad kaga bogan kartaa majaladdan.
Hal-abuur Hiddeedka Haweenka Soomaalida
Qormadan oo aad u xiiso badan waxay si faahfaahsan usoo bandhigeysaa kaalinta haweenka Soomaalidu ku leeyihiin hal-abuurka tixda, iyo weliba awooddooda gaarka ah ee xagga maansaynta. Qoraha qormadan wuxuu “buraanburka” ku tilmaamayaa inuu yahay “boqoradda” tixda, halka uu gabaygana ku magacaabayo “boqorka” tixda suugaanta Soomaalida. Hase yeeshee, marka aan maqalno “hal-abuur hiddeedka haweenka Soomaalida” waxaa durba xusuusteenna kusoo dhaca “buraanbur” oo keliya, iyadoo aan is-moodsiinno in guud ahaan hal-abuurka haweenku uusan dhinacna u dhaafi karin curinta “buraanburka”.
Bahda Dhaqansidaha Gobaad waxay gogoldhigga majaladdan kaga sii afeefteen in Dhaqansiduhu ka caagganaan doono arrimaha siyaasadda. Dhanka kalena, waxay ballan-qaadeen in tirsi kasta ay majaladdan u xulan doonaan “qormooyin tayo leh, si ay u kobciso, tacliimiso, una xoodaamiso garaadka akhristayaasheeda, islamarkaana u ibo-furto maskax dhaqankeeda u dhug leh”.
Haddaba, maadaama Dhaqansidaha Gobaad uu u dhashay, una taagan yahay ujeeddada kor ku xusan, bahda Gobaad waxaa looga fadhiyaa kala saafidda ama kal-soocidda DHAQANKII SOOMAALIDA EE SOO-JIREENKA AHAA, IYO DHAQAN-SIYAASADEEDKA SUMAYSAN ee haatan lagu dhaqmo, iyadoo haatanba qarka loo saaran yahay in la wada rumaysto in DHAQAN-SIYAASADEEDKAAS SUMAYSANI yahay dhaqankii soo-jireenka ahaa ee Soomaalida. Sidoo kale, bahda Gobaad waxaa kaloo looga fadhiyaa in xittaa ay kala hufaan dhaqan Soomaaligii soo-jireenka ahaa oo isaga qudhiisa leh qaybo badan oo aan la saanqaadi karin nolosha casriga ah.